Nifanehitra tamin’ny jiolahim- boto roa izy teny an- dalana, izay niomana ny hanendaka azy. « Avy hatrany dia voaendaka ny finday teny aminy sy ny vola tany am- posiny », hoy ny fitantaran’ny iray tampo aminy. « Mbola saiky hanala ny kirarony koa ilay olon- dratsy fa tsy nekeny ka nanohitra mafy izy. Tsy nampoiziny fa avy dia notsatohan’ny ilay jiolahy tamin’ny antsy ny kibony. Nitolefika izy ka ny olona sendra nandalo no namonjy azy teny amin’ny hopitaly », hoy ihany ity havany.
« fanomezana avy any amin’ny rainy, izay efa maty mantsy ilay kiraro, ka izay no niarovany zay mafy tamin’ireto mpanendaka », hoy ny fanazavana azo. Niady mafy tamin’ny fahafatesana izy tao anatin’ny tapa- bolana. Efa niala nenina ny fianakaviana nitsabo. Nahazo ny faritra mahafaty tao amin’ny kibony ilay antsy ka tsy namela nivalo. Maty omaly ary halevina rahampitso alahady any amin’ny faritra Antsirabe any ity zatovolahy ity, izay faralahy amin’ny zaza telo mianadahy iray tampo.